साहित्य – Page3– Tesro Ankha
सगर मलेसियामा सम्मानित
मलेसिया । कवि तथा गीतकार दिलिप राई ‘सगर’ सम्मानित भएका छन् । गत कात्तिक २ गते नेपाली समाज पिटिपी कम्पनीद्वारा आयोजित दीपावली सांस्कृतिक कार्यक्रम कवि तथा गीतकार राई सम्मानित भएका हुन् । । पिटिपी समाज अध्यक्ष दीपक लामा र कार्यक्रम संयोजक शिव सहयात्रीले उनलाई दोसल्ला, ढाका टोपी ओढाएर सम्मान गरेका थिए । केस्रा विधाका प्रवक्तासमेत रहेका उनले सम्मानपत्र र ट्राफीसमेत पाएका थिए । सम्मान ग्रहण गर्...
डा. केसी : हामी तिम्रो साथ छौं
सुरेश यक्सो हो म चुप बसेकै हो थाहा नपाएर चुप बसें बुझेर, बुझ्पचाएर चुप बसें कोही बोलिदिन्छन् कि भनेर चुप बसें कसैले साथ दिन्छन् कि भनेर चुप बसें त्यो मेरो लडाईं होईन भनेर चुप बसें ऊ कराई रह्यो, म तमासा हेरेर चुप बसें । हो म चुप बसेकै हो किनकी ऊ मेरो जातको थिएन ऊ मेरो पार्टीको थिएन ऊ मेरो धर्मको थिएन दूरदूरसम्म नाता केलाएं, अहँ ऊसँग केही सम्बन्ध थिएन उसले सबैको लागि हो भन्यो,...
थाहै नपार्इ तिमिसँग दिल बसेछ
असल चरित्र मुटुभित्र ननिक्लने खिल बसेछ घुमिरने सम्झनाको रिल बसेछ, पहिलोचोटि यस्तो भयो जिन्दगीमा थाहै नपार्इ तिमिसँग दिल बसेछ ।...
अलग अभियानको असार शृंखलामा साहित्यकार किराती
ललितपुर । वरिष्ठ साहित्यकार जसराज किराती र लोकप्रिय गायक संगीतकार नरेन्द्र प्यासीको विशेष उपस्थिति र प्रस्तुतिसहित अलग अभियानको असार शृंखला सम्पन्न भएको छ । असार शृंखलामा कवि किरातीले सदावहार गीतका लागि गायक प्यासीको प्रशंसा गर्दै ‘अलिकता’, ‘मानचित्र’, ‘सङ्कल्प’, ‘यो सहरमा’ शीर्षाकृत कविता सुनाए । गायक तथा सङ्गीतकार प्यासीले ‘के भुल भो प्रिय’, ‘एउटा परदेशी आई’, ‘तिमीविनाको जीवन’, ‘मेरो प...
दीपेन्द्र राई घरबाट विद्यालय पुग्न १५ मिनेट लाग्थ्यो । जहाँ उनले निम्नमाध्यमिक तहसम्मको पढाइ पार लगाइन् । धनुषा निम्नमाध्यमिक विद्यालय झापाका सबै शिक्षक–शिक्षिकाले उनलाई हृदयदेखि नै माया गर्थे । माया नगरून् पनि कसरी । जसले विद्यालयको इज्जत राख्छ, जो पढाइमा अब्बल छ, ऊसँग विद्यालयले धेरै कुरा आस गरेको हुन्छ । अनि उसैलाई त हो शिक्षक–शिक्षिकाले माया गर्ने । धनुषा निम्नमाध्यमिक विद्यालय पढ्दा...
नेपाली साहित्यमा ‘महाभारत’
रामप्रसाद धिताल महाभारत, सनातन धर्मावलम्बीको धार्मिक ग्रन्थ हो । महाभारत द्वापरयुगमा भारतवर्षको कुरुक्षेत्रमा भएको युद्धलाई आधार बनाएर संस्कृत भाषामा लेखिएको छ । भरतवंशी राजा दुश्यन्तदेखि पाण्डव स्वर्ग गएसम्मको कथालाई महर्षि व्यासले काव्यको रूप दिएका छन् । महाभारत विश्वका प्राचीनतम ग्रन्थमध्ये विशाल एवम् सर्वाधिक चर्चा पाएको ग्रन्थ हो । सनातन धर्ममा महाभारतलाई पाँचांै वेदसमेत भनिन्छ । हस्ति...
दीपेन्द्र राई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सुख–दुःखको बात मार्दै थियौं । प्रसंग अन्तै मोडियो । नेपाल फर्केपछि के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ? इजरायलमा कार्यरत शेर्पिनी कान्छीलाई मैले सोधेँ । प्रतिउत्तर थियो, ‘समाजसेवा ।’ समाजसेवा भन्दा त भेग भयो । यसलाई अझै निचोडमा भन्दिनु न । मैले फेरि अनुरोध गरेँ । उताबाट जवाफ आयो, ‘बाबुआमा नभएका र दुःख पाएका केटाकेटी पढाउँछु । सहाराविहीन वृद्धवृद्धाको टेक्ने लौ...
शेरबहादुर जन्मिने रे, कुर्सी मिलाइदेऊ
प्रसूति व्यथा लाग्यो रे,एउटा भोटो सिलाइदेऊ शेरबहादुर जन्मिने रे, कुर्सी चट्ट मिलाइदेऊ । अन्धो प्रेम गरेर, भारत खुसी पारेको सुशीलालाई जिस्काउँदा, पहिलो चुनाव हारेको । छोड्दै–छोड्दै आका छन्, मधेसीले मागहरू ओइलाएर खङ्ग्रङ्ग, केही मुला सागहरू । एमालेको अडान धेरैलाई थाहा छैन, पत्याए है जनताले ठिकै हो भन्ने अलि बेला भा’छैन । प्रचण्डका जुगाँ नि चुनावले फुलायो थापाजीको गाईलाई, ए...
१२ बजे अफिस पुग्छन् खरदार र नासु अचेल
(गजल) बगिरहेको छ गरिबको आँखामा आँसु अचेल पाकिरहेको छ धनीको भान्सामा मासु अचेल । अलैँचीको बोट मासेर गरिएछ करेला खेती यसो भन्छन् ससुरालीमा ससुरा र सासु अचेल । लोकतन्त्र आयो तर भएन केही परिवर्तन १२ बजे अफिस पुग्छन् खरदार र नासु अचेल । यो देशमा किन अझै भ्रष्टाचार रोकिएन ? यही कुरा बुझ्न म त साह्रै छु जिज्ञासु अचेल ।...
सुस्मा राई वसन्तले पालुवालाई पोल्टामा पारेको बेला खुला आकाशमा चराहरू उडिरहेको बेला चर्कियो नेपाल आमाको कोमल छाती एक्कासि त्यो धरहरा भत्किएको बेला न त टार्न सक्नु न त रोक्नु नै दैव प्रकृतिसँगै मिलेको बेला नियतिलाई नसकिने रोक्नु धर्तीमा ठूलै वज्रपात परेको बेला दैवले नि मारे क्यारे थपडी भत्किएर जाँदा मेरो झुपडी नेपाललाई पर्नु चोट परेको बेला हल्लिरह्यो जमिन पटक/पटक विनाश...